YEYINTNGE(CANADA): Thursday, December 23
23 Dec 2010 ဒိုင်ယာရီ
23 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.pdf
3052K View Download
23 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.doc
3131K View Download
23 Dec 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/23/20100အကြံပြုခြင်း
မီးမီး ရေ… ဆောင်းတောင်ရောက်လာပြီ
ကျမတို့ဟာ အချိန်အပိုင်းအခြား တခုအတွင်းမှာ တောကြီးမျက် မဲ မဟုတ်ပေမဲ့ ကားသံတွေ စိုးစိမျှ မကြားရတဲ့ နေရာကို ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံ ဆိုတာလဲမရှိ။ ချစ်ရတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့လဲ ကမ္ဘာခြားနေတာ မဟုတ်ပေမဲ့ မြင်တွေ့ခွင့် မရှိသလောက်ရှားတဲ့ နေ ရာကို ရောက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ အားလုံး တချိန်ထဲရောက်တာ မဟုတ်ပေမဲ့ အားလုံးက တပြေးညီထဲ ဖြစ်သွားတဲ့ နေရာပေါ့။ ကျမတို့ ၈ ယောက်ဟာ ညီအမ အရင်းတွေ မဟုတ် ပေမဲ့ ညီအမအရင်းထက် ပိုပြီးတော့ နားလည်နေကြပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ နံရံအိုတွေ ကြားက အုတ်ရိုးထဲမှာ ၇ နှစ်ကြာနေခဲ့ရ စဉ်ကပေါ့။
နံရံ ၄ ဘက်ကြားက အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ကျမနဲ့ မီးမီး အတူတူ နေခဲ့ရပါတယ်။ မီးမီး က အိမ်ထောင်ရှင်တယောက် ဖြစ်ပြီး ကလေး ၂ ယောက် အမေလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီးမီးက ကျမတို့ထက်တော့ အသက်ငယ်ပါတယ်။ မီးမီးမှာ ၄ နှစ်အရွယ် သမီး ၁ ယောက်၊ ၂ နှစ် အရွယ် သား ၁ ယောက် ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ သူက သူ့မိသားစုကို လွမ်း ဆွတ်နေတဲ့ အခါမျိုးမှာ သူ့ကလေးတွေ အကြောင်းပြောပြနေပေမဲ့ တခြားလူ စိတ်အ နှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်တော့ ဘယ်တော့မှ လုပ်လေ့မရှိပါဘူး။ သူ့မှာ ဖြစ်ချင်တာကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်တတ်တဲ့ အလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲနေ ပါစေ သူက သူယုံကြည်ရာကို ဆက်လုပ်နေတာဘဲ မဟုတ်ပါလား။
သူက အိမ်ထောင်ကြပြီးမှ တက္ကသိုလ်တက်ဖြစ်တဲ့သူပါ။ သမီးလေးကို နို့ချိုတိုက်ရင်း ကျောင်းတက်တဲ့ အကြောင်းပြောတော့ ကျမတို့ ရီကြရပါတယ်။ တခါတလေ အိမ်မှာ ကျန်တဲ့ သမီးငယ် နို့ဆာနေရင် သူက ကျောင်းမှာ ဝေဒနာခံစားရတဲ့ အကြောင်းပြောပြ တော့ မိခင်တယောက်ရဲ့ ဘဝကို ခံစားမပေးနိုင်သေးတဲ့ ကျမတို့အတွက်တော့ ယုံတမ်း တခုပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
မီးမီး ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်က အနစ်နာခံတတ်တာပါပဲ။ ဘယ်သူ့ အပေါ်မှာ မဆို သူက အနွံ့အတာခံ တတ်ပါတယ်။ ကျမတို့ အင်းစိန်မှာတုန်းက ချက်ပြုတ်စား သောက်လို့ မရပါဘူး။ ချက်တယ်ဆိုလို့ မီးသွေး မီးဖိုနဲ့ အကျအန ချက်တယ်လို့ မထင် လိုက်ပါနဲ့။ တကယ်က အိုးတိုက်ဖွဲပြာတွေနဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေကို သုံးပြီးတော့ မီးဖိုတာ ပါ။ အညှော်နံ့ကလဲ တော်တော်လေး ဆိုးပါတယ်။ အဲဒီလို ညှော်နံ့ဆိုးလို့ ဘယ်သူမှ ဟင်းမချက်ချင်ပေမဲ့ မီးမီးကတော့ တတိုက်လုံးစားဖို့ သူတယောက်ထဲ ဒိုင်ခံ ချက်ပါ တယ်။ ဘယ်တော့မှ မချက်ချင်ဘူးလို့ ပြောလေ့ မရှိပါဘူး။
မီးမီးက အထူသဖြင့် ကျမရဲ့ အနွံအတာကို တော်တော်ခံပါတယ်။ အင်းစိန်မှာက အစိမ်း အစို မစားရပါဘူး။ သာယာဝတီ ရောက်ရောက်ခြင်း ကျမ အပင်တွေ စစိုက်ပါတယ်။ ကျမတို့တိုက်က ထောင်ပိုင်ရုံးခန်းကနေ လှမ်းမြင်တာမို့ ထမင်းကိစ္စ (ကျမတို့သာယာဝ တီ ရောက်ရောက်ချင်း စကြွေးတဲ့ ထမင်းက နီရဲပြီး အတော်ကြမ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့တွေ မစားနိုင်လို့ မယူကြတာကနေ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုပြီး ပြဿနာက ကြီးထွားသွားတာပါ။)ကလဲ ရှိနေတော့ ထောင်ပိုင်က ကျမတို့ကို ညစ်တဲ့ သဘောနဲ့ အ ပင် မစိုက်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ကျမစိုက်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပင်တွေကို နှုတ်ခိုင်းပါ တယ်။
ကျမက ပေကျစ်ကျစ် လုပ်တတ်သူဆိုတော့ အပင်ကို ရအောင်စိုက်ပါတယ်။ ထောင်ပိုင် ကလဲ ကျမတို့ မိန်းခလေးတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတော့လုံးဝကို ခွင့်မပြုဘဲ ကျမ စိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေကို နှတ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျမလဲ ဒေါသတွေက ထွက်နေပါတယ်။ ကျမက အလုပ်မရှိတော့ အပင်တွေကိုပဲ တသသ လုပ်နေတာ မဟုတ်လား။ ကျမ အသည်းကို အပ်နဲ့ဆွ နေသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျမနဲ့ တခန်းထဲနေပြီး ညီအမလို ဖြစ်နေ တဲ့ မီးမီးက ပြောပါတယ်။ “အမ ဒေါသထွက်မနေနဲ့ မီးမီး ဘယ်လို လုပ်ပေးရမလဲတဲ့”။ ကျမ၊ ရီရီနဲ့ မီးမီး တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျမတို့က ထောင်ပိုင်တန်းစီ လာ ရင် အပင်တွေကို ပုံစံထုတ်ထဲ ထဲ့ထုတ်ကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာ ထောင်ပိုင်က တပတ်ကို ၁ ရက် ထောင်ကို လှည့်လည် ကြည့်ရှူလေ့ရှိပါ တယ်။ အဲလို ထောင်ပိုင်လှည့်ကြည့်တာကို ထောင်ပိုင်တန်းစီတယ်လို့ ခေါ်ပြီး သူလာ ရင် အခန်းတွေထဲက ပစ္စည်းတွေကို အထုပ်တွေနဲ့ထည့်ပြီး သူမမြင်နိုင်တဲ့ နေရာမှာ ထပ် ထားရပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တာကို ပုံစံထုတ်တယ်လို့ ပြောကြတာပေါ့။
ကျမတို့ရဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပင်ကို အမြစ်တွေပါ ကျန်မနေအောင် သေချာဂရုစိုက်တူး၊ ကျန် ချောင်းအိတ်ကို ရေထွက်အောင် အပေါက်တွေဖောက်ပြီးတော့ အပင်ကို အိတ်ထဲထည့်၊ ထောင်ပိုင်မလာခင် ပုံစံထုတ်တဲ့အခါ ပုံစံထုပ်ထဲထည့်ထုပ်၊ ထောင်ပိုင်ပြန်သွားလို့ တန်း ဖြုတ်တာနဲ့ အပင်ကို သူ့နေရာသူပြန်ထား၊ အဲဒီ အလုပ်ကို မီးမီးက မငြီးမငြူ လုပ်ပါ တယ်။ ၃ ပတ် လောက်ကြာမှ ထောင်ပိုင်က သတိထားမိသွားပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးပင် တွေ ဘက်ကို လှည့်ကြည့်တော့ အပင်တွေ မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ထောင်ပိုင်က ကြေနပ် သွားပုံရပါတယ်။ သူပြန်သွားတော့မှ ကျမတို့တတွေ ပြန်ထုတ်ပြီး သူ့နေရာသူထားလိုက် တော့မှ ထောင်ပိုင်ရုံးခန်းက ကြည့်ရင်လှမ်းမြင်နေရတော့ ထောင်ပိုင် တင်းသွားပုံရပါ တယ်။ ၁ ပွင့်နဲ့ ထောင်မှူးကို လာကြည့် ခိုင်းပါတယ်။ ထောင်မှူးလာကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထုပ်ကိုမြင်သွားတော့ ပြုံးစိစိနဲ့ ထွက်သွားပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်ကထဲက ထောင်ပိုင်လဲ ကျမတို့ကို မရစ်တော့ပါဘူး။
မီးမီးက သူ့ခင်ပွန်းကို အရမ်းချောတယ်လို့ ကြွားတတ်ပါတယ်။ အမှန်လဲချောပါတယ်။ အသားညိုညို၊ မျက်လုံးမျက်ခုံး ကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုတော့ ကိုလှမိုးက ကုလားဆင်လေး ပေါ့။ မီးမီးနဲ့ ကျမက ထောင်ဝင်စာ အတူတူ ထွက်တော့ ကိုလှမိုးကို ကျမကမြင်ဘူးတာ ပေါ့။ တိုက်မှာက မီးမီးရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် ရွှေစင်နဲ့ ကျမ ပဲ ကိုလှမိုး ကို မြင်ဘူးတာဆိုတော့ ကျမတို့က “မီးမီးရယ် နဲနဲလျော့လိုက်ပါ ကိုလှမိုးက ကုလားဒိန် လေးပါ” လို့ ပြောတော့ မီးမီး ဆွေ့ဆွေ့ ခုန်နေပါတယ်။ ကျမတို့ကလဲ ဘယ်တော့မှ အ လျော့ မပေးပါဘူး။
မီးမီး ရဲ့ ဝါသနာက သီချင်းဆိုတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အသံကတော့ သိပ် မကောင်းပါဘူး။ မီးမီး ဆိုရင်ကောင်းတဲ့သီချင်းက တော်လှန်ရေးသီချင်းတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ မီးမီးက တွေ့ရာသီချင်း ဆိုတတ်တော့ ကျမတို့က နားညည်းတယ်လို့ထင်ရင် နောက်ကနေ စာသားတွေမှားနေ တယ်ဆိုပြီး တွေ့ရာကြုံရာ စာသားတွေကို လိုက်ထောက်ရင် မီးမီး စိတ်ညစ်တတ်ပါ တယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် မီးမီး က မပြင်ဘူးအမရယ် ဆိုပြီးခေါင်းမာမာနဲ့ ငြင်းတတ်ပါတယ်။
တခါက မှတ်မှတ်ရရ ဆောင်းဝင်ကာစပေါ့။ တန်းပိတ်တော့ မီးမီးက တံခါးဝက သံတန်း တွေကိုကိုင်ပြီး သီချင်းဆိုဖို့ စိုင်းပြင်းနေပါတယ်။ ကျမ ပုံစံ စတွေနဲ့ ကိုယ်ဖာသာ ချုပ် ထားတဲ့ Made in Tharyarwaddy ခြင်ထောင်ထဲဝင်ပြီး ကွေးနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပဲ ကျမတို့အခန်းထဲကို ဓါးခုတ်ကောင်လို့ခေါ်တဲ့ အစိမ်းရောင် နှံကောင်တွေ ဝင်လာပါ တယ်။ သဘာဝကို ချစ်တတ်တဲ့ မရွှေမီးမီးက နှံကောင်တွေကို ကြည့်ရင်းက သာယာဝ တီ မှာ မို့လို့ နှံကောင်မြင်ရတာ အင်းစိန်မှာ မမြင်ရဘူးလို့ ပြောနေပါတယ်။ ကျမတို့တွေ အင်းစိန်ထောင်ကနေ ပြောင်းလာကြတာလဲ သိပ်မကြာလှသေးဘူးလေ။ ဒီတော့ မြင်သ မျှက အထူးအဆန်းတွေချည်းဘဲပေါ့။ အစကထဲက ဘယ်လိုလွမ်းရင် ကောင်းမလဲ စဉ်း စားနေတဲ့ မရွှေမီးက စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ “ဆောင်းသီချင်းကို စဆိုပါတယ်။
“ဒီဆောင်းနှင်းမြူရယ် ကိုယ်ချင်းလဲ မစာတယ် ချမ်းတယ် ချမ်းတယ် မေးခိုက်ခိုက်တုန် အောင် စောင်နဲ့ခြုံတောင် မလုံဘူး အချစ်ရယ် မင်းကိုယ်ငွေ့နဲ့ ထွေးကာမှ ပိုနွေးမယ် ထင် တော့တယ် ပိုနွေးနိုင်မယ် (အချစ်ရယ်) ၂ ပိုနွေးနိုင်မယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ခံစားချက်အ ပြည့်နဲ့ ဆိုပါတယ်။ အမှန်ကတော့ သူ့ရင်ထဲမှာ သူ့မိသားစုလေးကို အရမ်းလွမ်းနေပါ လိမ့်မယ်။ ကျမတို့တွေလဲ နားထောင်ရင်း သူ့ကို ကိုယ်ချင်းစာ မိပေမဲ့ မနောက်ရရင် မနေ နိုင်လို့ ကျမက ဖီလင် အောက်သွားအောင်နောက်ကနေ စာဖတ်နေပါတယ်။ စာဖတ် တယ်ဆိုတာက နောက်ကနေ တတွတ်တွတ်နဲ့ ရေရွတ်နေတာပါ။ အဲဒါကို ၁၈ နှစ်သာရှိ သေးတဲ့ လေးလေးမွန်က စာဖတ်တယ်လို့ အမြဲသုံးလေ့ရှိလို့ပါ။
ဆောင်းသီချင်းကို ဆိုနေတုန်းမှာဘဲ မီးမီးက ထိတ်လန့်တကြား ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ မကြီးရေ နှံကောင်တွေလားမသိဘူး ရှေ့မှာ ပျံလာကြတာ မဲနေတာဘဲတဲ့။ ကျမက ခြင် ထောင်ထဲကနေ မီးမီးသီချင်းဆိုတာ ကြိုက်သွားလို့လာအားပေးတာနေမှာပေါ့လို့ ပြော လိုက်ပါသေးတယ်။ ခဏလေးအတွင်းမှာဘဲ အခန်းတွေထဲကို တရစပ်ဝင်လာလို့ မီးမီးလဲ အိပ်ရာထဲ ပြေးဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျမတို့တွေ့လိုက်ရတာက တခန်းလုံး နှံ ကောင်တွေ တိုးဝှေ့ပျံသန်းနေကြပါတယ်။ ကျမတို့တွေလဲ ဘဝမှာ နှံကောင်တွေ အဲဒီ လောက် အများကြီးကို အဲဒီတခါဘဲ မြင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ ထောင်ပိုင်နဲ့ အသည်းအသန် ယှဉ်ပြိုင်စိုက်ပျိုးခဲ့ရတဲ့ ခရမ်းချဉ်ပင် တွေဟာ နှံကောင်တွေ ဝိုင်းနားလိုက်တာ ညှိုးနွမ်းသွားပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး အကင်း လေးတွေကိုလဲ ကိုက်ဖြတ်စားသောက်သွား ကြပါသေးတယ်။ မီးမီးကတော့ စိတ်ညစ် သွားတဲ့ ကျမကို ပြောတာက “ထောင်ပိုင်က မအောင်ဖြူနဲ့ တိုက်လိုက်တယ်ထင်တယ် နော်” တဲ့။ ကျမရဲ့ ဒေါသတွေက မီးမီး အပေါ်ကျ သွားပါတော့တယ်။ သာယာဝတီ ဆို တာက ဖျာလိပ်နတ် မအောင်ဖြူရဲ့နယ်မြေတဲ့လေ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ မီးမီး ကျမအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ လောင် စာဆီတွေ အဆမတန် ဈေးတက်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၈၈ ကျောင်းသားတွေက ဦး ဆောင်ပြီးဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြကြတာကြောင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေအားလုံး ပုန်း ရှောင်နေကြရပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးတို့ကိုတော့ ဖမ်းဆီးထားပြီးတဲ့ အချိန်မှာပေါ့။ ကျမနဲ့ မီးမီး စကားပြောနေတုန်း ကိုစိန်လှိုင်နဲ့ ကိုမာကီးက ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ရေနံသာ မှတ်တိုင်ထိပ်က ယင်းမာမြိုင် လဘက်ရည်ဆိုင်ကို ထွက်ခဲ့ပါတဲ့။ ကျမနဲ့ မီးမီး လက်ဘက် ရည်ဆိုင်ရောက်တော့ ကိုမာကီက
“မီးမီး နင်က ကလေးတွေနဲ့ နင်အဖမ်းခံရရင် မလွယ်ဘူး၊ နင်အခုအချိန် အပြင်ထွက်ပါလား” ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။
ကျမတို့က “ဟုတ်တယ်။ မီးမီးထွက်မလား” လို့မေးတော့ မီးမီးက
“ဟင့်အင်း မီးမီး မထွက်ဘူး၊ မီးရဲ့ ရဲဘော်တွေ တောင် နေရဲသေးတာ၊ မီးတယောက်ထဲ ပြေးစရာလားတဲ့။ ကိုမာကီကတော့ ပြောရှာပါတယ်။ တကယ်လို့ လာဖမ်းရင် ပြေးလို့ လွယ်အောင်တော့ အပေါက်ရှာထားနော်တဲ့။ ကျမက
“ကိုမာကီ…စိတ်ချနေနော်။ ကျမတို့အိမ်က ပြဿနာ မရှိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။” လို့ ကျမပြောပြတော့ ကိုစိန်လှိုင်ကလဲ သူရောနေလို့ရမလားတဲ့။ ဒါကြောင့် မီးမီးရော ကိုစိန်လှိုင် ရော ကျမတို့အိမ် ရောက်လာပါတယ်။
အဲဒီနှစ်က မီးမီးသမီးလေး ၁၀ တန်းဖြေရမှာလေ။ မီးမီးက ကျမကို သေချာမှာခဲ့ပါတယ်။ “အမရေ…မီးတို့က အဖမ်းတော့ခံ ရမှာဘဲ။ သမီးစာမေးပွဲ မပြီးခင် အဖမ်းခံရရင် သမီးမ သိပါစေနဲ့တဲ့။ မီးမီး အစား သမီးကို သွားတွေ့လိုက်ပါနော်တဲ့။ အဲဒီ စကားကြောင့် အထဲ က အဖြစ်အပျက်လေးတခုကို သတိရမိပါတယ်။
မီးမီးကတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တတ်ပါတယ်။ ကျမက တိရိစ္ဆာန် မချစ်တတ်သူပါ။ ကျမ တို့တိုက်ကို ဘယ်နေရာကမှန်းမသိတဲ့ ကြောင်မကြီးတကောင်ရောက်လာပါတယ်။ ကြောင်မကြီးမှာ ဇီးလဲ ပါလာပါတယ်။ ကျမတို့တိုက်မှာဘဲ ကြောင်လေး ၄ ကောင် မွေး ပါတယ်။ အဲဒီထဲက အထီးတကောင်ဟာ တော်တော် အကျင့်ဆိုးပါတယ်။ ကျမရဲ့ ခြင် ထောင်နဲ့ ကျမရဲ့ အဝတ်အစားထဲ့တဲ့ အိတ်ကို သေးနဲ့ အမြဲပန်းပါတယ်။ ကျမက လိုက် ရိုက်ရင် မီးမီးက မလုပ်ပါနဲ့ အမရယ်ဆိုပြီး အမြဲတားပါတယ်။ ကျမကလဲ သူတားလေ ပို ဒေါသထွက်လေဖြစ်ပါတယ်။ သူက ကျမကို အမ ဝဠ်လိုက်လိမ့်မယ်တဲ့။ ကျမကတော့ ဝဠ်ကနောက်မှလိုက်တာ သေးနံက အခုနံနေတာလေ ဒါကြောင့်သည်းမခံဘူးလို့ အမြဲ ပြောနေကြပါ။ မီးမီးကတော့ ကြောင်မလေး သူ့လက်ပေါ်လာ အိပ်တိုင်း သူ့သမီးလေး အိမွန်နဲ့ တူတယ်လို့ အမြဲတမ်းပြောပြောနေတတ်သူပါ။
သာယာဝတီရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့် ကိုလှမိုးထောင်ဝင်စာ အလာကျဲသွားပါတယ်။ ကျမ အမေကတော့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ ကိုလှမိုး မလာနိုင် ဘူးလို့ ပြောပြပေမဲ့ ထောင်ဝင်စာက ပြန်လာရင် မီးမီးကို နောက်ဖို့ ထောင်ဝင်စာ မထွက် ခင်ကထဲက တိုင်ပင်ထားကြပါတယ်။ ကျမ ထောင်ဝင်စာက ပြန်ရောက်တာနဲ့ ရီရီနဲ့ တီး တိုး တိုင်ပင်တဲ့ အိုက်တင်ကို ဖမ်းပါတယ်။ မီးမီးက အရမ်းသိချင်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီးမီးက ကျမကို အတင်းမေးပါတယ်။ မီးမီး ကျမတို့ အကွက်ထဲ ဝင်လာတာပေါ့။
ကိုလှမိုး နောက်မိန်းမယူသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် ပြောကြလို့ မီးမီး မျက်ရည်တောင် လည်လည်လာတဲ့ အထိပါပဲ။ အဲဒီအခါကြရင် မီးမီးက သဘောထားကြီးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကိုကို့ ကို မီးမီး ခွင့်လွတ်ပါတယ်လို့ မီးမီး ပြောနေကြပါ။ ဒါပေမဲ့ မီးမီးလွတ်ရင် သားနဲ့ သမီးကို တော့ ပြန်ခေါ်မယ်၊ အမလွတ်ရင် ကိုလှမိုးကို ပြောပေးနော်တဲ့။ အားလုံးထဲမှာ ကျမက အရင်ဦးဆုံးလွတ်မဲ့ သူလေ။ အဲဒီတုန်းက ကျမတို့က မီးမီး တမင်သဘောထားကြီး ဟန် ဆောင်တယ်လို့ ထင်မိပေမဲ့၊ မီးမီးက သူ့ခင်ပွန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် တကယ်သဘောထား ကြီးပါတယ်။
သူတို့လင်မယား တခါတရံ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ စကားများများ နောက်ဆုံးတော့ မီးမီးကပဲ ခွင့်လွတ်တတ်သူပါ။ မီးမီးက လူတိုင်းအပေါ်မှာလဲ ခွင့်လွတ် တတ်ပါတယ်။ သူမက သူ့မိသားစုကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသလို သူမရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလဲ ချစ်ခင် မြတ်နိုးသူပါ။ မီးမီးနဲ့ ကျမ စကားပြော ဖြစ်တော့ မီးမီး ပြောပြခဲ့တာက… “အမရေ…မီးမီးလေ သမီးနဲ့သား ကို ပြုစုပျိုးထောင်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီးမီးတို့က မိ သားစု ဘဝထဲမှာ နှစ်မြုပ်လိုက်ရင် မီးမီးတို့ရဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် စစ်ကျွန်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ မီးမီး အခု နိုင်ငံရေးလုပ်နေတယ် အမ” တဲ့။
တကယ်တော့ မီးမီးဟာ ပွင့်လင်းရိုးသားသူ တဦးဖြစ်လို့ ကျမတို့က မီးမီးကို ချစ်ခင်နှစ် သက်ပါတယ်။ မီးမီးက ကိုယ်ကျိုးစွန့်တတ် သူဖြစ်လို့ သူ့သမိုင်းကို သူကိုယ်တိုင် လှလှ ပပ ရေးဖွဲ့ထားသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အချိန်မှာ မီးမီဟာ ၆၅ နှစ်ဆိုတဲ့ အပြစ်ဒဏ်နဲ့ သူချစ်တဲ့ မိသားစုလေးကို လွမ်းနေမှာ သေချာပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အင်န်အယ်ဒီနဲ့ ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှု( ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ)
အဲသည်အတွက် ကျနော်တို့ကို၊ ဒေါ်စုကို၊ ကျနော်တုို့ မဟာမိတ်တွေကို အခုအချိန်မှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဖြန့်ကျက်မှုတွေ၊ အလုပ်တွေ၊ အမြင်တွေ တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်လာလို့ ကြိုက်သလို ဝေဖန်နိုင်တယ်။ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က လက်ခံပါတယ်၊ ကြိုဆိုပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အင်န်အယ်င်္ဒီကော၊ ဒေါ်စုကော၊ မဟာမိတ်တွေ မိတ်ဆွေတွေကောဟာ ပြောင်းလဲသွားခြင်း၊ ရွေ့သွားခြင်း မရှိပါဘူး။ တသဘောတည်း ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တတွေဟာ ငါးဖမ်းတဲ့အလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေတုန်းပဲ။ ငါးမျှားတံနဲ့ မျှားနေရာကနေ ပုိုက်ကွန်ပစ်ပြီးတော့ ဖမ်းလာတယ်။ ကွန်ယက်နဲ့ ဖမ်းလာတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နားမလည်နိုင်သူတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတာက အင်န်အယ်ဒီပါတီ ရုံးချူပ်တွင်းကနေပြီးတော့ ပြည်ပက အစုအဖွဲ့တွေ အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဒေါ်စုအပေါ်မှာ ပြောဆိုဝေဖန်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်အနေနဲ့ ချုပ်ပြီး ပြောရရင်တော့
By ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 22 ဒီဇင်ဘာ 2010
By ဦးဇော်ဝင်းလှိုင် ကြာသပတေး, 23 ဒီဇင်ဘာ 2010
ကုလ အနုမြူ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးခွင့်ပေးရန် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆို
သောမတ်စ်မောင်ရွှေ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၂၇ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကုလသမဂ္ဂ၏ အနုမြူ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ (IAEA) က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနုမြူစက်ရုံများ ရှိနေသည်ဟု စွပ်စွဲ ပြောဆိုခြင်း ခံနေရသော နေရာများသို့ လာရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပြုပါရန် မြန်မာစစ်အစိုးရကို မကြာသေးမီက စာရေးသား တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု အမည်ဖော်ပြမထားသော အမေရိကန် အရာရှိများကို ကိုးကားပြီး ဝေါလ်စထရိဂျာနယ်က ရေးသားသည်။
`မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ စက်ရုံများတွင် အနုမြူ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုများ ရှိနေသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်အပေါ် ရှင်းလင်းမှုများ လုပ်ပေးပါရန်´ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရသို့ ယခင်စာနှစ်စောင် ပေးပို့အပြီး ယခု တဖန် အိုင်အေအီးအေ ကာကွယ်လုံခြုံရေးဌာန အကြီးအကဲ Herman Nackaerts က ထပ်မံ ပေးပို့ အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု အဆိုပါဂျာနယ်က အမေရိကန်အရာရှိများကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ အနုမြူလက်နက် မပြန့်ပွားရေး စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုနေကြသော အနုမြူ စက်ရုံနေရာများသို့ စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခွင့်ပေးရန် အိုင်အေအီးအေက မေတ္တာရပ်ခံပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများအရ အဆိုပါ မေတ္တာရပ်ခံချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံက ငြင်းပယ်ခွင့်လည်းရှိပါသည်။
အိုင်အေအီးအေ၏ ယခုနောက်ဆုံးစာသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့အကြား အနုမြူဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှိနေ၍ အမေရိကန်အစိုးရက စိုးရိမ်ပူပန်နေသည် ဟူသောသတင်းများပါသည့် လျှို့ဝှက်ကြေးနန်းများကို ဝီကီလိ ဝက်ဘ်ဆိုက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
မသင်္ကာဖွယ် ပစ္စည်းအများအပြားကို မကွေးတိုင်း မင်းဘူးအနီးရှိ အနုမြူဓာတ်အားပေး စက်ရုံ ဆောက်လုပ်နေသည်ဟု ကောလဟလများ ထွက်ပေါ်နေသည့်နေရာသို့ သယ်ဆောင်နေကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်တခုက ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန် သံရုံးသို့ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ကြေးနန်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါကြေးနန်းများတွင် ရန်ကုန်ရှိ သြစတြေးလျ သံအမတ် မီရှဲလ်ချန်းကိုလည်း မြန်မာအစိုးရ အရာရှိတဦးက `မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့ ဆက်ဆံမှုဟာ သမရိုးကျ လက်နက်များအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြာမြင့်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်သည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်သည့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အနုမြူစွမ်းအင် အသုံးပြုရေးလဲ ပါဝင်ကြောင်း´ လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လက ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် ထူးထူးခြားခြားပင် အထက်ပါ ပြောဆိုချက်ကို အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်က ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့ပြီး မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံအကြား အနုမြူ အစီအစဉ်တရပ် အမှန်စင်စစ် လုပ်ကိုင်နေခြင်း မရှိကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့သည်ဟု နောက်ပိုင်းပေးပို့သော ကြေးနန်းများတွင် ဆက်လက် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဤသို့ပထမပြောဆိုချက်ကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းသွားမှုကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်သံရုံး၏ ဝန်ထမ်းတဦးက လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက ကောက်ချက်ချရာတွင် `လိုရင်းအချက်-မြန်မာအစိုးရနှင့် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများသည် ဆက်လက်၍ လျှို့ဝှက်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ တခုခု ဖြစ်ပွားနေသည်မှာတော့ သေချာသည်။ အဆိုပါ တစုံတခုတွင် အနုမြူ လက်နက်များလည်း ပါဝင်ပြီး သံရုံးက အစီရင်ခံရမည့် အထူးဦးစားပေး အဆင့်အတန်းတွင် ဆက်လက် ရှိနေသည်´ ဟု ရေးသားထားသည်။
ပေါက်ကြားလာသော ရန်ကုန်အမေရိကန်သံရုံးက ၂၀၀၄တွင် ပို့ခဲ့သော ကြေးနန်းများတွင် `မြောက်ကိုးရီးယား ပညာရှင်များသည် မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးလက်နက် (SAM) များ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်နေပြီး မကွေးတိုင်းအတွင်း စစ်ဘက်တနေရာတွင် မြေအောက် အဆောက်အဦးများကိုလည်း တည်ဆောက်နေသည်´ ဟု ရေးသားထားသည်။
နယူးဒေလီသို့ ၂၀၀၄ အတွင်း လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသော မြန်မာစစ် အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သူများက `အမေရိကန်က အာရုံစိုက်လာအောင် အနုမြူ လက်နက် ပိုင်ဆိုင်ရေး လုပ်ရရင် ကောင်းမလားလို့ သူတို့တွေးနေကြောင်း´ အိန္ဒိယအစိုးရကို ပြောကြားခဲ့သည် ဟု ယခင်အပတ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၂၀၀၄ နိုဝင်ဘာလက ပေးပို့ခဲ့သည့် အမေရိကန် သံတမန် ကြေးနန်းတွင် ရေးသားထားသည်။
ဒေလီရှိ အမေရိကန် သံရုံးမှ ပေးပို့ခဲ့သော အဆိုပါကြေးနန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ၂၀၀၄ အောက်တိုဘာလအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်သို့ လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အကြောင်း အဆင့်မြင့် အိန္ဒိယသံတမန် တဦးက အမေရိကန် သံတမန်များကို ပြောပြခဲ့သည့် သတင်းများအပေါ် အဓိက အခြေခံ ရေးသားထားသည်။
အနုမြူ စီမံကိန်းတရပ် မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်ဆောင်နေနိုင်ဖွယ်ရှိဟု အိုင်အေအီးအေ ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းက ယုံကြည်
ပြည်ပရောက် သတင်းဌာနတခုဖြစ်သည့် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) က ယခုနှစ်မေလက သတင်းတရပ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒုံးပျံ နှင့် အနုမြူအစီအစဉ်များကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း စစ်တပ်မှ ထွက်ပြေးဘက်ပြောင်းလာသည့် သူတဦး၏ ထွက်ဆိုချက်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဘက်ပြောင်းလာသူ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်းမှာ မြန်မာစစ်တပ်မှ အကြီးတန်း သိပ္ပံပညာရှင် တဦးဖြစ်ပြီး စာရွက်စာတန်း အထောက်အထား အများအပြားယူဆောင်ကာ တိုင်းပြည်မှ ထွက်ခွာလာ၍ နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ စာရွက်စာတန်းများကို အိုင်အေအီးအေ ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း ရောဘတ်ကယ်လီ သို့ DVB ကပြသခဲ့သည်။
ဘက်ပြောင်း ခိုလှုံလာသူ ပေးအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ အရ `မြန်မာနိုင်ငံသည် ယူရေနီယံ သတ္တုများကို တူးဖော်နေကြောင်း၊ အဆိုပါသတ္တု များကို ဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့် အနုမြူဗုံးများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ယူရေနီယံ ဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနေကြောင်း၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုတခုနှင့် ယူရေနီယံ သန့်စင်သည့် စက်ရုံတရုံကို ဆောက်လုပ်ရန်လည်း ကြိုးစားနေပြီး ယင်းက အနုမြူဗုံးလုပ်ရန် သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း ပြသနေသည်။
ယင်း ဆောင်ရွက်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန် သက်သက်အတွက် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤကိစ္စသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စွမ်းပကားနှင့် အလှမ်းကွာပါသည်။ ဤအခြေအနေများ ပြောင်းလဲသွားလျှင် အိုင်အေအီးအေသို့ အကြောင်းကြားရေးကိစ္စမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘောအတိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သေချာသည်မှာ ဤစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပြီး အနုမြူဗုံးတလုံးကို လျှို့ဝှက် တည်ဆောက်နေသည် ဆိုပါက အိုင်အေအီးအေသို့ သူတို့အလိုအလျောက် အကြောင်းကြားလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ´ဟု ကယ်လီက ရေးသားထားသည်။
DVB က ကယ်လီ၏ ပြောဆိုချက်ကို အသံလွှင့်အပြီးတွင် မြန်မာအစိုးရမီဒီယာ က `မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယူရေနီယံ သတ္တုများကို ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတ်ပေါင်းဖို တည်ဆောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေခြင်းများကို ယခင်ကလည်း မလုပ်ခဲ့၊ ယခုလည်း လုပ်ကိုင်နေခြင်း မရှိ၊ နောင်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ရန် အစီအစဉ်မရှိပါ´ ဟု မြန်မာကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်းက အိုင်အေအီးအေသို့ ပေးပို့ အကြောင်းကြားခဲ့သော စာကို ကိုးကားပြီး ဇွန်လ အတွင်းက ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
စွပ်စွဲပြောဆိုနေသော အနုမြူ အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အိုင်အေအီးအေ ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ဦး အချင်းများကြခြင်း။
ကယ်လီ၏ ကောက်ချက်များကို အိုင်အေအီးအေရှိ သူ၏အကြီးအကဲဟောင်း အော်လီဟိုင်နိုနင် (Olli Heinonen) အပါအဝင် အခြား အနုမြူကျွမ်းကျင် သူများက ငြင်းချက်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အိုင်အေအီးအေ ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း ပြောဆိုချက်များ ပါဝင်သည့် ၁၅ မိနစ်ကြာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို အမေရိကန် ရုပ်သံ အစီအစဉ်တခုက လွန်ခဲ့သောလက ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။ ဤမှတ်တမ်း ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို PBS နှင့် အမြတ်အစွန်းအတွက် မဟုတ်သည့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းသတင်းများ ရေးသား တင်ဆက်နေသည့် ProPublica တို့က ပူးတွဲ တင်ဆက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနုမြူအစီအစဉ်များ အပေါ် ကယ်လီ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှာ ပိုလွန်းသည်ဟု အဆိုပါ ရုပ်သံမှတ်တမ်းက စွပ်စွဲပြောဆိုထားသည်။
ဘက်ပြောင်း ခိုလှုံလာသူက ပေးအပ်ခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ယင်းအထောက်အထားများအပေါ် ကယ်လီ၏ ကောက်ချက်များ ရှိခဲ့သော်လည်း `ယခုအဆင့်တွင် ရှိနေသည့် အနုမြူ လက်နက် အစီအစဉ်များမှာ သံသယဖြစ်စရာ ကောင်းလောက်အောင် မရှိသေးပါ´ ဟု ဟိုင်နိုနင် က ပရို ပတ်ဘလစ်ကာ ရုပ်သံသတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် အဆိုပါရုပ်သံ အစီအစဉ်တွင် ကယ်လီအပေါ် စွပ်စွဲပြောဆိုထားသော အဓိကအချက်တချက်ကို ဟိုင်နိုနင်နှင့် ပရိုပတ်ဘလစ်ကာ တို့က ထုတ်လွှင့်အပြီး ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ အကြာတွင် ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ မှတ်တမ်းခွေနှင့်အတူ ပရိုပတ်ဘလစ်ကာ၏ မန်နေဂျင်းအယ်ဒီတာ စတီဖင်အိန်ဂယ်လဲဘတ်နှင့် နာတန်ဒိုတန် တို့ ပူးတွဲရေးသားထားသော ဆောင်းပါး တစောင်ကိုလည်း ပရိုပတ်ဘလစ်ကာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် တင်ထားသည်။ အဆိုပါ ဆောင်းပါးတွင် အထူးပြုလုပ်ထားသော `လက်အိတ်သေတ္တာ´ ဆိုသည့် ဓာတ်ပုံအပေါ် ကယ်လီ၏ ကောက်ချက်ကို ဟိုင်နိုနင်ကို ကိုးကားကာ ငြင်းပယ် ချေပထားသည်။
ယူရေနီယံ သတ္တု ထုတ်လုပ်ရာတွင် အပူချိန်မြင့်မားစွာ လိုအပ်သဖြင့် ဤကိရိယာသည် ဤလုပ်ငန်းနှင့် သင့်လျော်ခြင်းမရှိပါ´ ဟု သူတို့က ရေးသားထားသည်။ `ဒီပုံကို ကြည့်ရင် ခင်ဗျားတို့ တွေ့လိမ့်မယ်။ ဥပမာ ဒီသေတ္တာထဲမှာ ရာဘာ လက်အိတ်တွေရှိတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းမျိုး လုပ်ဖို့အတွက် ရာဘာ လက်အိတ်ပါတဲ့ သေတ္တာတလုံးနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး´ ဟု ဟိုင်နိုနင်၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားရေးသားထားသည်။
`ဒါသာသုံးရင် ဒီလူလက် လောင်သွားမှာပေါ့။ ဒီသေတ္တာဟာ ဒီလုပ်ငန်းအတွက်လို့ ကျနော်မထင်ဘူး´ ဟု သူက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကယ်လီ၏ ပြောဆိုချက်ကို ပရိုပတ်ဘလစ်ကာ၏ ချေပချက်ဟု ထင်ရသော အချက်တွင် မှားယွင်းသွားသည့် အချက်မှာ အဆိုပါ လက်အိတ် သေတ္တာကို အပူချိန် အလွန်မြင့်မားစွာ လိုအပ်သည့် ယူရေနီယံ သတ္တု ထုတ်လုပ်သည့်နည်း ထိုအဆင့်၌ အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ကယ်လီကရော DVB ကပါ အမှန်တကယ် မပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကယ်လီကလည်း ပရိုပတ်ဘလစ်ကာ သို့ ပက်ပက်စက်စက် တုံ့ပြန်ချက်တရပ်ကို ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ရာ `ဒီလက်အိတ်သေတ္တာကို ယူရေနီယံ သတ္တုထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ ကျနော်ပြောခဲ့တယ်လို့ ခင်ဗျားတို့က ပြောထားတယ်။ ကျနော် ဒီလို မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ အချက်ကို မိုက်မိုက်မဲမဲ မှားယွင်းကိုးကားခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားတို့အဖြစ်က ဘယ်လိုမှ ကာကွယ်လို့ မရတော့ဘူး။
စာနဲ့ရေးထားတဲ့ မှတ်တမ်းက ဒါတလွဲကြီးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြနေတာ။ ကျနော့် တင်ပြချက်တွေမှာ လက်အိတ်သေတ္တာနဲ့ ဗုံးထုတ်မယ့် ဓာတ်ပေါင်းဖို နှစ်ခုလုံးကို ပြထားပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလေး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်´ ဟု ရေးသားထားသည်။
ကယ်လီက သူ၏ အကြီးအကဲဟောင်းကိုလည်း ပြန်ပက်ခဲ့သည်။ `လက်အိတ် သေတ္တာနဲ့ ဗုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ခွဲခြားနိုင်ဘို့ ခင်ဗျားဆီမှာ အော်လီဟိုင်နိုနင် ရှိတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စွပ်စွဲ ပြောဆိုချက်တွေကို စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ဘို့ အိုင်အေအီးအေက တာဝန်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့မှာ ဟိုင်နိုနင်က အကြီးတန်း အရာရှိပါ။ ဒီယူရေနီယံနဲ့ ဆိုင်တဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာနှစ်ခုရဲ့ ခြားနားချက်ကိုသိဘို့ သူကျနော့် အစီရင်ခံစာကို ကောင်းကောင်း မဖတ်ခဲ့ဘူး။ ကျနော် အတိအကျ ရှင်းလင်းရေးသားထားတဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ ကျနော်ဘယ်တုံးကမှ မပြောခဲ့တာကို ရှင်းပြဘို့လုပ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုးရိုးကားယား ကြိုးပမ်းချက်နဲ့ ရောထွေးမပစ်ပါနဲ့။ သူဟာ ကျနော့်ကို ဝေဖန်ဘို့ ခင်ဗျားသုံးတဲ့ တဦးတည်းသော `နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်´ ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်မှာတော့ သူရှုံးပြီ။ ကျနော်မှားတယ် ဆိုတာပြောနိုင်ဘို့ ကိုးစား ယုံကြည်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခင်ဗျား မပြနိုင်ခဲ့ဘူး´ ဟု ထိုစာတွင် ရေးသားထားသည်။
ကယ်လီ၏ စာကိုရရှိပြီးနောက် ကယ်လီအပေါ် ကနဦး စွပ်စွဲထားသော အချက်ကို မှိန်ပစ်ရန်အတွက် အပိုဒ်တပိုဒ်ကို ဆောင်းပါးအဆုံးတွင် ပရိုပတ်ဘလစ်ကာ က ထည့်သွင်းထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော အနုမြူ လက်နက် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအပေါ် ရောဘတ်ကယ်လီ ရေးသားထားသော အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် `လက်အိတ်သေတ္တာ´ ဟု သိထားသော ကိရိယာ ကို ပိုမိုတိတိကျကျ ရှင်းလင်း တင်ပြပါသည်´ ဟု ရေးသားထားသည်။
ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားသော ဆောင်းပါးတွင် `လက်အိတ်သေတ္တာ´ ဟု သုံးနှုန်းရန် `ကိုးရိုးကားယား နိုင်ပါသည်´ ဟု ဟိုင်နိုနင် ၏ ပြောစကားကို ကိုးကား ရေးသားထားသည်။
ကယ်လီ၏ အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သူတို့၏သတင်းထောက် ဒက်ဖ်နာ လင်ဇာ (Dafna Linzer) က အမည်ဖော်ပြမထားသည့် အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ့တွင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို မေးမြန်းခဲ့သည်ဟု ပရိုပတ်ဘလစ်ကာ က ဆိုသည်။ အစီရင်ခံစာကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့သော စီအိုင်အေနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အနုမြူဌာနခွဲ မှ ကျွမ်းကျင်သူများက `မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနုမြူစီမံကိန်း အချို့ ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အနုမြူ လက်နက်များနှင့် ဆက်စပ်မှု မရှိပါ´ ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သူက ထိုရုပ်သံ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် ပြောဆိုထားသည်။
ပရိုပတ်ဘလစ်ကာမှ အင်ဂယ်လ်ဘတ်ခ် (Engelberg) ကလည်း ကယ်လီ၏ အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး DVBကို ထောက်ပံ့နေသူများကို ရဲရဲတင်းတင်း အခိုင်အမာ အတိုက်အခံလုပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
`ဒီအစီရင်ခံစာကို စိစစ်ဘို့ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး အသိုင်းအဝိုင်းကို သွားပြခဲ့ ပါတယ်။ ဒီစွပ်စွဲချက်တွေအပေါ် သူတို့က သိပ်မယုံကြည်ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကို ခင်ဗျားတို့သိပါသလား´ ဟု အင်ဂယ်လ် ဘတ်ခ် က အစီရင်ခံစာကို ရည်ညွှန်းပြီး အဆိုပါ ရုပ်သံမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
`စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ စီအိုင်အေ က ကျနော့်အစီရင်ခံစာကို တကြောင်းချင်း ဖတ်ကြည့်ပြီး ကျနော့် တွေ့ရှိချက်တွေကို ငြင်းဆိုတယ်လို့ ခင်ဗျားကပြောတယ်။ ခင်ဗျားပြောပုံက အမေရိကန် အစိုးရထဲက ထောက်လှမ်းရေး အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ အမြင်တွေ တထပ်ထဲကျနေသလို ပြောသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယူရေနီယံ ဗုံးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိအချို့က ကျနော့် အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ပြီး ကျနော့် တွေ့ရှိချက်တွေဟာ ယုတ္တိတန်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိုင်အေအီးအေက ပါရဂူတွေကလဲ ကျနော့်အမြင်ကို သဘောတူပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီအစီရင်ခံစာကို ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းက ဘယ်သူကမှ ကျနော်တင်ပြခဲ့တဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အထောက်အထားတွေကို ငြင်းချက်ထုတ်တာ မလုပ်ခဲ့ကြဘူး´ ဟု ကယ်လီက ပြောသည်။
မြန်မာ့အနုမြူ အစီအစဉ်များရှိကြောင်း ပြောဆိုချက်များကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ငြင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံက အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ရေး လုပ်ဆောင်နေသည် ဟူသော သတင်းများကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဖိစစ်ဝိချချိဝ ကလည်း ခပ်ပေါ့ပေါ့ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။ `အာဆီယံကို အနုမြူကင်းမဲ့ ဒေသကြီးအဖြစ်နဲ့ မြင်လိုပါတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက အာဆီယံ-အမေရိကန် ထိပ်သီး အစည်းအဝေးမှာ ပြောဆိုခဲ့တာကို ကျနော် မှတ်မိနေပါတယ်´ ဟု အဖိစစ် က ပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေသတွင်းရှိ မည်သည့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့ (အာဆီယံ) ဝင်နိုင်ငံမျှ အနုမြူလက်နက် မလိုချင်ကြကြောင်း၊ သို့သော် အမျိုးသား လုံခြုံရေး အတွက် အနုမြူလက်နက် ပြဿနာကို ထိုင်းနိုင်ငံက အမြဲတမ်းစောင့် ကြည့်လေ့လာနေကြောင်း အဖိစစ်က ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
သို့သော် နောက်တနေ့တွင် အဖိစစ်ကို နိုင်ငံရေးအရ အမြဲတမ်းလို ထောက်ခံခဲ့သော ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာကြီးက သတင်းစာခေါင်းကြီးမှ ပြန်လည် ဝေဖန်ခဲ့သည်။
`လျိူ့ဝှက် အနုမြူ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ထပ် စွပ်စွဲချက်ကို မြန်မာ အစိုးရအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်အဖိစစ်ဝိချာချိဝ က ကာကွယ်ပေးခဲ့တာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝီကီလိ က နောက်ဆုံးဖွင့်ချခဲ့တဲ့ ကြေးနန်းတွေအပေါ် မစ္စတာအဖိစစ် ချေပဖို့ ကြိုးစားတာတွေကတော့ မခိုင်လုံ လှပါဘူး။ သူက မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေ ပြောတာကို ကိုးကား ပြောတယ်။ သူတို့မှာ ပွင့်လင်းမှုတို့ အစဉ်အလာကောင်းတို့ ဆိုတာ သိပ်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန်က အမေရိကန်သံရုံးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က ပို့ခဲ့တဲ့ ကြေးနန်းကလဲ သူ့ရဲ့ အနုမြူ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရဟာ ကမ္ဘာကို လိမ်ညာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား မပြနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပါဘဲ၊ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဝါဒဖြန့် ပြောကြားချက်တွေအပေါ် မစ္စတာအဖိစစ်က စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းထားပြီး ယုံကြည်နေတာကလဲ အဓိပ္ပာယ် မရှိလှပါဘူး´ ဟု အဆိုပါ သတင်းစာခေါင်းကြီးတွင် ရေးသားထားသည်။
Burma Today News Updates (December 23, 2010)
Al Jazeera Broadcast Daw Aung San Suu Kyi Live TV Program (News Report) December 23, 2010
အယ်လ်ဂျာဇီးယားရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုက်ရိုက် စကားပြောခြင်း အစီအစဉ် (မြင့်လှိုင်)
Aung San Suu Kyi: At the Crossroads (Al Jazeera) Video
Regime’s Regional Officers force to attend the Villagers to the Opening Ceremony of the Relocated Village (News Report)
အောင်မြင်သာ စံပြကျေးရွာ အပ်နှင်းပွဲတွင် လူပေါင်း တထောင် အဓမ္မ တက်ရောက်ခိုင်းကြောင်း ကချင်အဖွဲ့က ပြော (ကိုညီ)
“Burmese Youth Leaders Should Attend the UNESCO CHAIR Forum” said the Coordinator of the Event (News Report)
ယူနက်စကို လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲကို မြန်မာလူငယ်များ တက်ရောက် စေလို (ကိုညီ)
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းတောင် စိတ်နဲ့ကိုယ် တထပ်တည်း မကျနိူင်တဲ့လူသားတွေ ဘ၀မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်သူ ဘ၀ မှာ အယုံလွန်ပြီး တဒင်္ဂ သာယာမှု အတွက် မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာတွေ လုပ်နေတာကို အသိညဏ်လေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး စဉ်းစားတတ်ကြအောင် ၀ိုင်းဝန်း တားဆီးပေးကြဖို့ မိတ်ဆွေတို့ကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် ။ ကိုယ်ရဲ့ ပုံရိပ်စစ်ကို အပြင်မှာတွေ့ပြီးတာတောင် မှတ်တမ်းတင်ထားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ စိတ်ထားတွေကို သတိထားကြပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် ။ နံမည်ကြီး အနုပညာရှင်များ အနေဖြင့်လည်း အနေအထိုင် အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ် ။ နိူင်ငံတကာမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံ ၊ ပြုမူ ပြောဆို နေထိုင်ပုံတွေကို လူငယ်တွေက စံပြ နံမူနာ ထားပြီး အတုယူ နေကြတာပါ။ အဲဒီတော့ နံမည်ကြီးလိုတာနဲ့ အဖော်အချွတ် အသားပေး ပုံရိပ်တွေကို အသုံချပြီး လူငယ်တွေကို လမ်းမှားရောက်အောင် ပို့ဆောင်နေတာ အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး ။ မင်းသမီး တယောက် လိုးရှင်းလိမ်းလို့ နံမည်ကြီးတာကို အခြားလူတွေက ၀ိုင်းဝန်း ဟန့်တားကြမယ့် အစား သူက လိုးရှင်းလိမ်းရင် ငါတို့ကလည်း အားကျမခံ တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လိုက်ပြိုင်နေကြတာ စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ အနုပညာရှင်များ ကို လေးစားစွာ အသိပေးလိုပါတယ် ။ စနစ်တခု၏ အသိညဏ် အဆိပ်ခတ်မှု ကြောင့် ယိုင်နဲ့နေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို အနုပညာရှင် များက ပြန်လည် တည့်မတ်ပေး နိူင်အောင် ကြိုးစားပေးကြမယ် ဆိုရင် များစွာ ၀မ်းမြောက်မိမှာ အမှန်ပါဘဲ ။
လက်ရှိ ကျနော်တို့ နိူင်ငံ ပကတိ အနေအထားက ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရနိူင်အောင် တော်တော်လေးကို ပျက်စီးနေပါတယ် ဆိုတာ အသိဥာဏ် ရှိသူတိုင်း လက်ခံနိူင်ကြမှာပါ ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ လူငယ်တွေက သာ ရုန်းကန် လုပ်ရှားမှု မလုပ်ချင်ကြဘဲ ရေစုန်မြောလိုက်နေကြရင် နောင်အခါဝယ် မြန်မာ နိူင်ငံသား ဆိုတာ ဒီထက် ပိုပြီး မျက်နှာငယ်ကြရပါလိမ့်မယ် ။ သစ်ပင်တပင်ကို နေရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်မရတဲ့ နေရာမှာ ထားကြည့်တဲ့အခါ အဲဒီ သစ်ပင်ဟာ နေရောင်ခြည် ရှိရာ အရပ် ကို သူတို့ဘ၀ ဆက်လက် ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့ အတွက် တစိုက်မတ်မတ် ချည်းကပ်နေကြတာ ကို အတုယူစရာ အဖြစ် သဘောထားပြီး ဒီနေ့မြန်မာနိူင်ငံက လူငယ်လေး များ အနေဖြင့်လည်း အသိညဏ် အမှောင်ချခံထား၇တာက လွတ်မြောက်အောင် ပညာညဏ် အလင်းရှိရာကို အထူးကြိုးစား လျှောက်လှမ်းပြီး ယခုခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခဆိုးကြီးတွေက ရုန်းထွက် လွတ်မြောက်နိူင်အောင် ကြိုးစားပေးကြပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးရင်း နောင်အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်ဆောင် အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသမီး များ အဖြစ် ထာဝစဉ် ရပ်တည်နိူင်အောင် ကြိုးစားကြကာ မြင့်မြတ်သော ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဂုဏ်ယူစွာ ပန်ဆင်လျှက် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော နိူင်ငံတော်ကြီး ဆီသို့ ပျော်ရွှင်စွာ ချီတက်ကြပါစို့ .............။
By တွတ် တွတ်
စစ်အစိုးရအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဆန်းတရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်ကစလို့မကြာခင်ရက်ပိုင်းက wikileaksအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကနေပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်အမေရိကန်သံရုံးလျှို့ဝှက်ကြေးနန်းစာ တွေမှာပါဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့နေရွှေသွေးအောင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကိုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့အချစ်ဆုံးမြေးလို့လူသိများတဲ့နေရွှေသွေးအောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့
အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ပွဲတခုမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးကနေနုတ်ထွက်ခါစ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့အတူ ယဉ်တွဲထိုင်ခိုင်းခဲ့တာ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းဆင်းပွဲတခုမှာ အတွင်းရေးမှူး(၁) သူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့ တတန်းတည်းအထိုင်ခိုင်းခဲ့တာတွေကို ထောက်ပြီးတော့ ဒါတွေဟာထူးခြားချက်တွေအဖြစ် ရန်ကုန်စီးပွားရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေတချို့အကြားမှာ ဝေဖန်ပြောဆို သုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေနဲ့မြောက်ကိုးရီးယားသမတ ကင်ဂျုံအီးလ်လို မြေးဖြစ်သူကို နိုင်ငံရေး နေရာပေးချင်လို့အခုလိုပွဲထုတ်လာတာလား? စသဖြင့်သို့လောသို့လော တီးတိုးဝေဖန်တာတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးနေ၀င်းရဲ့ အကျဉ်းကျနေတဲ့မြေးတွေဖြစ်တဲ့ ကျော်နေ၀င်း။ ဇွဲနေ၀င်းနဲ့ အေးနေ၀င်းတို့တုန်းးကလို တပ်က အရာရှိတွေကိုလည်ကတုံးစတစ်ကော်လံအင်္ကျီတွေဝတ်ခိုင်းပြီး သက်တော်စောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့ နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့အဖွဲ့သစ်ကလည်း ဒီရက်ပိုင်း ရန်ကုန်က ညကလပ်လောကမှာ လက်စောင်းထက်လာနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောမလဲ ..သူ့ကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ သူလုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ဆိုတာ အောက်ကပြဿနာတော့အစကတည်းက ကျနော်တို့ဆီမှာ စံနစ်ကပျက်သွားပြီလေ ဥပဒေ တရားဥပဒေဆိုတာမရှိဘူး ဥပမာပြောရရင် တိုင်းမှူးတယောက်ရဲ့သား အဲဒီတိုင်းမှာသူဆရာကြီးဘဲ သူလုပ်ချင်ရာလုပ်မှာဘဲ တိုင်းမှူးထက်မြင့်တဲ့ ကောင်ထက်မယဉ်ရသေးသ၍တော့ သူကဆရာကြီးဖြစ်နေတာ ဥပဒေကိုမရှိတော့. အဲဒီတော့ တိုင်းမှူးသားလောက်တောင်မှဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေတာဆိုတော့ No(1)ရဲ့မြေးဆိုတော့သူ့ကိုပြပြီးတော့အောက်ကလူတွေကလုပ်ခံရမယ်သူ့ကိုပြပြီးတော့လုပ်ချင်တာတွေလုပ်မယ်ကလေးကလည်းငယ်တော့ဘာမှနားမလည်တော့ဘူး. သူ့အတွက်ကောင်းတယ် သူ့ကို ဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်. အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ ဒါကဖြစ်မှာဘဲ ဥပဒေရဲ့ ထိန်းကြောင်းမှုမရှိတဲ့နေရာမှာတော့ဒါကဖြစ်မှာသဘာဝဘဲ။
ဒီလူမှမဟုတ်ဘူးနောက်လူတွေတက်လာရင်လုပ်မှာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေဘာတွေတော့ နေရာပေးတာမပေးတာတော့ရှိချင်မှ ရှိမှာပေါ့။ အခုဥစ္စာကအကြည့်ရဆိုးတာကတော့ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေမှာထည့် officalကိစ္စတွေမှာ ထားထားတော့။
ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက် wikilaksကပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ သတင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေမြေး ဖိုးလပြည့်က မန်ချက် စတာကလပ် ရှယ်ယာများကို ၀ယ်ယူဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ပူဆာခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက ဒေါ်လာ သန်း တစ်ထောင်(တစ်ဘီလီယံ) ဖြင့် မန်ယူကို ၀ယ်ယူလိုက်လျှင် အစိုးရအတွက် ဝေဖန်မှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး အဆိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့်၊ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာ အကုန်ကျခံပြီး မြန်မာ့ အမျိုးသားဘောလုံးကလပ်များ ဖန်တီးဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်က နာဂစ်မုန်းတိုင်းဒဏ်မှ အသက်ရှင် ကျန်သူများမှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့၊ သောက်သုံးရေမဲ့ ဖြစ်နေချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။
ဖိုးလပြည့်လို့လူသိများတဲ့ နေရွှေသွေးအောင်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့သမီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ကြည်ကြည်ရွှေ နဲ့အငြိမ်းစားဒုဗိုလ်မှူးကြီးဦးနေစိုးမောင်တို့က၁၉၉၁ခု မေလ၂၂ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုမွေးအပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အာဏာရခဲ့တဲ့အတွက် ကံထူးခြားစေတဲ့ကလေးအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာပိုပြီး တော့မျက်နှာသာရခဲ့တယ်လို့အစိုးရလုပ်ငန်းရှင်ကပြောပြပါတယ်။ သူက ဦးသန်းရွှေအနေနဲ့ သူကဒီလိုမျိုးထိပ်ကိုမရောက်လာခင်မှာ ဗေဒင်ဆရာတဦးကသူ့ကိုဟောတာကတော့ သူ့မိသားစုမှာကလေးတယောက်မွေးလာမယ် ဒီလိုကလေးတယောက်ကြောင့် သူဟာထိပ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်. မင်းဖြစ်လာမယ်။ လို့ဟောတယ်။ တကယ်ဘဲမထင်မှတ်ဘဲဗြုံးစားကြီး ဒီကလေးမွေးပြီးဦးသန်းရွှေဟာထိပ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်. အဲဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုပြီး ဒီကလေးကို အရမ်းဦးစားပေးတယ်။ဟိုပွဲတွေဒီပွဲတွေမှာလည်း သူတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး တခြားလူတွေလည်းပါပါတယ်။ အောက်ကစီစဉ်တဲ့တပည့်တွေကလည်း ဖားကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်နေရင်းနဲ့ သူလည်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကြည့်နေတာလားတော့မသိဘူးပေါ့လေ။
နေရွေသွေးအောင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၀၇ခုနှစ် ၁၆နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကစလို့ ၂၀၀၈ခုနှစ်ဇွန်လက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မောင်ဝိတ်အပါ မူးယစ်ဆေးအမှု၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်ဇန္န၀ါရီလက မော်ဒယ်အမျိုးသမီးတဦးငယ် ခေတ္တပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမှု တွေနဲ့ သတင်းစာမျက်နှာတွေအပြင်ဖက်မှာ ထင်ရှားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတဖက်မှာလည်း အသက်အရွယ်ငယ်ပေမဲ့ အစိုးရနိုင်ငံတော်ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ နေရာရလာတာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေအကြားမှာ ကွယ်လွန်သူအာဏာရှင်ကြီးဦးနေ၀င်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသံဝေဂတွေအကြောင်းစပ်ဆက် တွေးစကြတာတွေလည်းရှိလာကြပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမိသားစုအကြောင်းကို တစိုက်မတ်မတ်လေ့လာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ကိုအောင်ဇော်က အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဆုံးသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းနဲ့မတူတာလေးတွေရှိတယ်။ ကျနော်မြင်တာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကသူ၁၉၉၂/၉၃အာဏာရလာကတည်းကသူ့ရဲ့မြေးကိုအဲဒီတုန်းကတော်တော်ငယ်သေးတာပေါ့နော်..သူpromoteလုပ်ခဲ့တာတွေအခုထိကလူတွေကြားမှာပြောစရာတခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေ။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကြတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကသူရဲ့သမီး ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းရှိတယ်သူ့ရဲ့မြေးတွေ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ အခုလက်ရှိထောင်ကျနေတဲ့သူ့ရဲ့မြေး၃ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ နိုင်ငံရေးကိုအဲလိုမျိုးဆွဲသွင်းတာမျိုး တွေ ခုနလိုမျိုး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေခရီးထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ခေါ်သွားပြီးတော့ Dsaသင်တန်းဆင်းပွဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားဖူးတာဘဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ပြည်အိန္ဒိယပြည်ကိုသွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုမျိုး လူကြားထဲမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါလာတာမျိုးတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ..ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းဓားထက်တယ် အာဏာအရမ်းကြီးတယ်ဆိုတာက အတိုင်းအတာတခုဘဲ ကျနော်တို့သိရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး သူ့ရဲ့မိသားစုကို အကြီးအကျယ်ကိုရှေ့တန်းတင်တာကိုတွေ့ရတယ် ဒါက ထူးခြားမှုတခုလို့မြင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မိုလို့လည်း လူတွေကမေးခွန်းထုတ်တာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သူ့ရဲ့မြေးကို အထူးသဖြင့် သူအရမ်းချစ်တဲ့ နေရွှေသွေးအောင်ကို နိုင်ငံရေးထဲကိုဆွဲသွင်းချင်တာလား ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကဘာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာမကြာခင်မှာဘဲ ဒီတပ်ထဲက အနားယူရတော့မယ် နောက်ကွယ်ကကြိုးဆွဲမှာလား သူစိတ်ချရတဲ့သူထားမှာပါဆိုရင် သူ့ရဲ့အုပ်စုတစုဖန်တီးဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အခါကြတော့ ဒါကြောင့်ဘဲနေရွှေသွေးအောင်ကို promoteလုပ်နေတာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်။ ဒါကလည်းဒီအချိန်မှာအတော်ပြောရခက်ပါတယ်။ နေရွှေသွေးအောင်ကို စစ်တပ်ထဲဆွဲသွင်းတာမတွေ့ရဘူး။ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့လုံးတာတွေ့ရတယ်၊ သူ့ရဲ့ကိုယ်ရံတော်တွေနဲ့အပျော်အပါးလိုက်စားတာမျိုးတွေ မာဖီးယားဆန်ဆန်လုပ်လာတာမျိုးတွေ့ရတယ်။
ဦးနေ၀င်းရဲ့တော်ဝင်မိသားစုကို အခြေအနေယိုင်လဲသွားတဲ့အထိ အရေးယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအနေနဲ့ သူ့အလှည့်မှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင် အထူးသတိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မိသားစုထဲမှာ စစ်တပ်ရာထူးလက်ကိုင်ရှိသူကို နေရာချန်မထားခဲ့နိုင်တဲ့ ဦးနေ၀င်းတုန်းကလို အဖြစ်မခံဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေနဲ့ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးကျားကန်မလဲဆိုတာကတော့ အထူးစောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေနဲ့ရန်ကုန်စီးပွားရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက လေ့လာသုံးသပ်နေကြပါတယ်။
ကိုကျော်မင်းထွန်းစုစည်းတင်ပြသော Rfaမှ အသံလွှင့်ချက်အားပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဖိုးလပြည့်တို့ သတင်းကို အင်တာနက်ပေါ်ကို တင်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲတာက စဖြစ်တာ၊
by ရာ စု သစ် on Thursday, December 23, 2010 at 11:56am
နအဖစစ်ခေါင်းဆောင်၏ မြေးဖြစ်သူက ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းနှင့် အချင်းများရာမကျေနပ်သဖြင့်နေအိမ်ကို ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏မိဘများကိုကျေနပ်သည်အထိကန်တော့တောင်းပန်ခိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့် (ခ) နေရွှေသွေးအောင်သည်စင်္ကာပူတွင်ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူနှင့် အင်တာနက်ကိစ္စစကားများခဲ့သည်ကိုမကျေနပ်သဖြင့် ယခုလ (၁၉) ရက်နေ့ညတွင် ကမာရွတ်မြို့နယ် (၂)ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သည့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ မိဘများကို ခေါ်ဆောင်သွားကာ ယခုကဲ့သို့တောင်းပန်ခိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဖြစ်တာက စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်နေရင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဖိုးလပြည့်တို့သတင်းကိုအင်တာနက်ပေါ်ကို တင်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲတာက စဖြစ်တာ၊ အဲဒါကိုဖိုးလပြည့်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေက (၁၉) ရက်နေ့ညမှာ အဲဒီကောင်လေး အိမ်ကို သွားပြီးခဲနဲ့ပေါက်တာ၊အဲဒါကို ကောင်လေးရဲ့မိဘတွေက ည (၁) နာရီလောက်မှာ ကမာရွတ်စခန်းကိုသွားအမှုဖွင့်တယ်”ဟု အမည်မဖော်လိုသူတဦးက ပြောသည်။ထိုည (၁) နာရီ မိနစ် (၂၀)ခန့်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ မြေးဖြစ်သူက ကမာရွတ်ရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီးတံခါးဖွင့်ရန်ပြောဆိုသည့်အတွက် တာဝန်ကျ စခန်းစောင့် အရန်ရဲမေများကတံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ရသည်။
“ဖိုးလပြည့် စခန်းကိုရောက်တော့ တံခါးမဖွင့်ရင် ကားနဲ့ဝင်တိုက်မယ်လို့ပြောတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ရတာ၊အခြေအနေမကောင်းတော့ တိုင်ချက်ဖွင့်တဲ့သူတွေကိုအမျိုးသမီးအချုပ်ခန်းထဲမှာ ခဏဝှက်ထားသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေကိုမထုတ်ပေးရင်ပြဿနာအရှည် ရှည်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီး စခန်းက အရာရှိတွေကိုခြိမ်းခြောက်တော့ဖိုးလပြည့်လက်ထဲကို လွှဲအပ်လိုက်ရတယ်”ဟုဆက်ပြောသည်။ဖိုးလပြည့်နှင့်အတူလုံခြုံရေးအတွက် အနောက်ပိုင်းခရိုင်မှူး၊ ကမာရွက်မြို့နယ်မှူးနှင့်အခြားလုံခြုံရေးကား (၇) စီး လိုက်ပါခဲ့ပြီး ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ အိမ်တအိမ်သို့တိုင်ချက်ဖွင့်သူများကို ခေါ်ဆောင်သွားကာ တာဝန်ရှိသူများကို အိမ်အပြင်တွင်စောင့်ခိုင်းထားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ အိမ်နီးချင်းက ဆက်ပြောသည်။
“သူတို့ ပြန်ထွက်လာလို့ မေးလိုက်တော့ သန်းရွှေရဲ့မြေး ဖိုးလပြည့်ကသူတို့လုပ်ရပ်တွေ မှားပါတယ်လို့ ဝန်ခံပြီးထိုင်ကန်တော့ပြီးတောင်းပန်ခိုင်းတယ်၊ (၂၁) ရက်နေ့ ညမှာလည်း လူငါးယောက်လောက်ကအဲဒီအိမ်ကို ခဲနဲ့ထပ်ပေါက်သေးတယ်၊ အဲဒါ ကမာရွတ်စခန်းကိုသက်သေခံပစ္စည်းနဲ့တကွ တိုင်တာ၊ နယ်မြေခံကမာရွတ်စခန်းက အခုချိန်ထိအမှုမဖွင့်ပေးဘူး”ဟုဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည်မကြာသေးမီကလည်း စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းကျောင်းဆင်းပွဲတခုသို့ ဇနီးသားသမီးများအား ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနေရာနှင့် ထူးခြားစွာ နေရာချထားရာ မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့်ပါပါဝင်ခဲ့ခြင်းကို သတင်းစာများတွင် ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြခဲ့သည်။﻿
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အင်န်အယ်ဒီနဲ့ ကွန်ယက်လှုပ်ရှား...
စစ်တပ်ပါဝင်တဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
ကုလ အနုမြူ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးခွင့်ပေးရန် ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဖိုးလပြည့်တို့ သတင်း...